एसिड भाटा कसरी व्यवहार गर्न | ईर्ष्या राहत पाउन
पोस्ट सक्छ 4, 2017
एसिड भाटा पीडादायी र निराशा अवस्था छ. तपाईं एसिड भाटा देखि ग्रस्त भने, तपाईं प्रमुख लक्षण मध्ये एक छ जो ईर्ष्या परिचित हुनेछ. को घाँटी यो जल दुखाइ जीवन कठिन बनाउन सक्छ, विशेष गरी जब तपाईं सुत्न प्रयास गर्दै. Luckily, त्यहाँ एक समाधान छ. यो अवस्था बारेमा थप जान्न पढ्न, जस्तै कसरी एसिड भाटा व्यवहार राम्रो.
त्यसैले, के गराउँछ एसिड भाटा? पेट तल्लो esophageal स्फिन्क्टर वा छोटो लागि लेस भनिन्छ प्रवेश मा मांसपेशी को घन्टी छ. यो वाल्व खाना पेट प्रविष्ट गर्न अनुमति छ र esophagus मार्फत फिर्ता बाहिर आफ्नो बाटो बनाउन देखि पेट एसिड वा अरू केहि रोक्छ. जब लेस malfunctions, या त द्वारा आंशिक खुला वा गलत समयमा खोलेर बाँकी, एसिड भाटा परिणाम हो. पेट एसिड esophagus अप फिर्ता आफ्नो बाटो बनाउँछ, जल sensations सिर्जना र संभावित को ऊतक हानिकारक यो एक लामो समय को लागि भैरह्यो भने.
एसिड भाटा लागि कारण भिन्न. कहिलेकाहीं, यो रूपमा धेरै खाने वा खाने पछि तल बिछाउने रूपमा सरल छ. यो लेस मांसपेशी मा दबाव राख्नु र यसलाई खोल्न बल गर्न सक्नुहुन्छ. केही खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ, मसालेदार खानेकुरा जस्तै, रक्सी, सोडा, र कफी पनि एसिड भाटा बढी सम्भावना बनाउन सक्छ. ibuprofen जस्तै दबाइहरु, एस्पिरिन, वा मांसपेशी relaxants पनि एक प्रभाव पार्न सक्छ.
तपाईं पुरानो एसिड भाटा छ भने, कारण सामान्यतः सर्त एक hiatal हर्निया भनिन्छ. सामान्यतया, डायफ्राम, जो साँस संग मद्दत गर्छ कि मांसपेशी छ, पेट मा तल प्रेस र लेस बन्द राख्न मद्दत गर्छ. को लेस समावेश पेट माथिल्लो भाग डायफ्राम माथि सारियो छ भने, यो एक hiatal हर्निया भनिन्छ. Hiatal hernias प्रेस पेट एसिड esophagus अप, एसिड भाटा को एक पुरानो संस्करण कारण. तपाईं नियमित एसिड भाटा छ भने, तपाईं एक hiatal हर्निया भोगिरहेका हुन सक्छ भने, एउटा डाक्टर हेर्न हेर्न.
त्यसैले, एक hiatal हर्निया समावेश छ भने एसिड भाटा रोग कसरी व्यवहार गर्न? सजिलो तरिका लेस मांसपेशी मा धेरै तनाव दिइरहेको बच्न जीवनशैली बानी परिवर्तन गर्न बस छ. एकैचोटि कम खाना खाने सजिलो समाधान मध्ये एक. आफ्नो पेट मा थप खाना, को कठिन यो लेस मांसपेशी रहनुहोस् बन्द गर्न को लागि हो. सानो, थप बारम्बार भोजन एक ठूलो फरक बनाउन सक्छ. साथै, सुत्न जाँदै केही घण्टा भित्र खाने वा पिउने रक्सी जोगिन प्रयास, र अलिकति भ्कुकावट मा सुत्न आफ्नो ओछ्यानमा टाउको केही इन्च हुर्काउन प्रयास. तल बिछाउने जब सबैभन्दा एसिड भाटा हुन्छ, त्यसैले यो समय समयमा लेस मा दबाव कम महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं वजन भएको हो भने, वजन खोने पनि एसिड भाटा लक्षण ठूलो फरक बनाउन सक्छ.
एसिड भाटा एक कष्टप्रद अवस्था छ, तर यो व्यवस्थित छ. सबैभन्दा एसिड भाटा धेरै खाने वा पूर्ण पेट तल बिछाउने कारण छ. यदि एसिड भाटा यथावत् वा पुरानो छ, समाधान को लागि आफ्नो डाक्टर हेर्न वा पत्ता लगाउन तपाईं एक hiatal हर्निया भोगिरहेका हुन सक्छ कि.